कपिल शर्माको शो मा किन जाँदैनन् आमिर खान ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कपिल शर्माको शो मा किन जाँदैनन् आमिर खान ?
मुम्बई – बलिउडका धेरै कलाकार कपिल शर्माको शोमा गइसकेका छन् । धेरै सेलिब्रेटी फिल्मको प्रचारका लागि शो मा पुगेका हुन्छन् ।अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान जस्ता सेलिब्रेटी पनि शो मा देखिएका छन् । तर, आमिर खान भने अझै पुगेका छैनन् ।धेरै कलाकार फिल्मको प्रचारका बेला कपिलको कार्यक्रममा आउन चाहन्छन् । कपिलको कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भएका कारण पनि कलाकारहरुले फिल्मको प्रचारका लागि उनको शोमा जाने गर्छन् ।
कपिलको शो चलिरहेका बेला आमिरका कैयन् फिल्म प्रदर्शन भए तर उनी कार्यक्रममा गएनन् । कपिलको शोलाई आमिरले प्रचारको माध्यम नै ठानेनन् ।त्यसो त आमिर खानको प्रचारको तरिका फरक छ । हरेकपटक उनी केही न केही नयाँ गरिरहेका हुन्छन् । उनले गजनी, थ्री इडियट्स फिल्म रिलिजका बेला पनि फरक प्रचार शैली अपनाएका थिए ।
जब फिल्मको प्रचारको नै आवश्यक पर्दैन भने आमिर पनि किन कपिलको प्रचारमा जाऊन् र ! कतिले त आमिरलाई कपिलको शो मन नपर्ने पनि बताउने गरेका छन् ।कपिल शर्माले शो मा कयैन् पटक आफ्नो सीमा पार गरिसकेका छन् । उनले महिलालाई मजाक बनाउँछन् । स्टारमाथि हावी हुने कोशिश गर्छन् । कपिलले कतिपटक त कलाकारको अपमान पनि गरेका छन् । जुन आमिरलाई पटक्कै मन पर्दैन ।
कोरोना संक्रमित व्यक्ति निको भइसकेपछि पुन उनमा यो भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम छ ?